မကြာသေးမီကကွယ်လွန်သွားတဲ့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူနဲ့ပါတ်သက်ပြီး သားလေးဂျက်ဂျက်ပြောလာတဲ့စကားလေးကို ၀မ်းနည်းစွာနဲ့ပြောပြလာတဲ့ နန်မြတ်ဖြိုးသင်း – Cele Snap
ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်ကို အခိုင်အမာ ရရှိထားတဲ့ မင်းသမီးချောလေး နန်းမြတ်ဖြိုးသင်းက ဇာတ်ကားတွေရိုက်ကူးခဲ့သလို တေးသီချင်းတွေလည်း သီဆိုပြီး အနုပညာအလုပ်တွေကို နှစ်အတော်ကြာအောင် လုပ်ကိုင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ပရိသတ်တွေကလည်း သူမကို ချစ်ကြလို့ ယနေ့အထိ အားပေး ချစ်ခင်နေကြ ဆဲပါ ။
လတ်တလောမှာတော့ ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါဆိုးကြီးနဲ့ ရုတ်တရက် ခွဲခွာသွားတဲ့ ခင်ပွန်းအတွက် နန်းမြတ်က ဖြေမဆည်နိုင်အောင် ဝမ်းနည်းနေရတာပါ ။ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ လောကကြီးမှာ မရှိတော့ပေမယ့်လည်း သားနဲ့သမီးကိုအစစအရာရာ ဂရုစိုက်ရင်း နေထိုင်သွားမှာဖြစ်ကြောင်း ကိုလည်း အမြဲပြောလေ့ ရှိတာကြောင့် အားလုံးက လေးစားနေကြတာပါ ။
အခုလည်း ခင်ပွန်းဖြစ်သူနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သူမ ဝမ်းနည်း စိတ်မကောင်း ဖြစ်နေချိန်တိုင်း သားဖြစ်သူက သိတတ်စွာ အားပေး စကားတွေပြောလာပုံကို ခုလိုဖော်ပြလာပါတယ် ။ ” အရမ်းသိတတ်လိမ္မာတဲ့သားလေးအမေငိုရင် ဖေဖေ့ကိုလွမ်းလို့လားမေမေ လို့မေးတတ်တယ် ပီးရင်မငို့နဲ့နော် တိတ်တိတ်လို့လဲချော့တတ်တယ် ညတိုင်းလဲဂျက်ဂျက်ဖေဖေရောလို့မေးတတ်တယ် ဖေဖေကနေမကောင်းလို့ပြန်လာလို့မရတော့ဘူးလို့ပြောရင် ဖေဖေ့ကိုဆေးရုံကားကြီးနဲ့ခေါ်သွားတာလားမေမေလို့ ပြန်ပြောတတ်တယ် ဒါကညတိုင်းပြောနေကျ မနေ့ညကတော့ ထူးထူးဆန်းဆန်းပြောတယ် မေမေ! ဖေဖေနဲ့လိုက်မသွားနဲ့နော် ဂျက်ဂျက်နဲ့နေခဲ့နော်လို့ပြောရှာတယ် ရင်ထဲမှာပြောမပြတတ်အောင်ဝမ်းနည်းခံစားရတယ် တဖက်မှာလဲမပြည့်စုံနိုင်ဖူးဆိုတာ သိပေမယ့်သူ့အဖေရှိတုန်းကလိုပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားပီးထားရမယ် ငါကျန်းမာမှအသက်ရှည်မှဖြစ်မယ်လို့စဉ်းစားမိတယ် မေမေ့သားကြီးလေး သန်မာကြံ့ခိုင်တဲ့သားလေးဖြစ်ပါစေသားရယ်” ရေးသားထားရာ ပရိသတ်ကြီးအတွက် ပြန် လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါ တယ် ။
ပရိသတျတှရေဲ့ အခဈြကို အခိုငျအမာ ရရှိထားတဲ့ မငျးသမီးခြောလေး နနျးမွတျဖွိုးသငျးက ဇာတျကားတှရေိုကျကူးခဲ့သလို တေးသီခငျြးတှလေညျး သီဆိုပွီး အနုပညာအလုပျတှကေို နှဈအတျောကွာအောငျ လုပျကိုငျခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ ။ ပရိသတျတှကေလညျး သူမကို ခဈြကွလို့ ယနအေ့ထိ အားပေး ခဈြခငျနကွေ ဆဲပါ ။
လတျတလောမှာတော့ ကိုဗဈကပျရောဂါဆိုးကွီးနဲ့ ရုတျတရကျ ခှဲခှာသှားတဲ့ ခငျပှနျးအတှကျ နနျးမွတျက ဖွမေဆညျနိုငျအောငျ ဝမျးနညျးနရေတာပါ ။ ခငျပှနျးဖွဈသူ လောကကွီးမှာ မရှိတော့ပမေယျ့လညျး သားနဲ့သမီးကိုအစစအရာရာ ဂရုစိုကျရငျး နထေိုငျသှားမှာဖွဈကွောငျး ကိုလညျး အမွဲပွောလရှေိ့တာကွောငျ့ အားလုံးက လေးစားနကွေ တာပါ ။
အခုလညျး ခငျပှနျးဖွဈသူနဲ့ ပတျသကျပွီး သူမ ဝမျးနညျး စိတျမကောငျး ဖွဈနခြေိနျတိုငျး သားဖွဈသူက သိတတျစှာ အားပေး စကားတှပွေောလာပုံကို ခုလိုဖျောပွလာပါတယျ ။ ” အရမျးသိတတျလိမ်မာတဲ့သားလေးအမငေိုရငျ ဖဖေကေို့လှမျးလို့လားမမေေ လို့မေးတတျတယျ ပီးရငျမငို့နဲ့နျော တိတျတိတျလို့လဲခြော့တတျတယျ ညတိုငျးလဲဂကျြဂကျြဖဖေရေောလို့မေးတတျတယျ ဖဖေကေနမေကောငျးလို့ပွနျလာလို့မရတော့ဘူးလို့ပွောရငျ ဖဖေကေို့ဆေးရုံကားကွီးနဲ့ချေါသှားတာလားမမေလေို့ ပွနျပွောတတျတယျ ဒါကညတိုငျးပွောနကြေ မနညေ့ကတော့ ထူးထူးဆနျးဆနျးပွောတယျ မမေေ! ဖဖေနေဲ့လိုကျမသှားနဲ့နျော ဂကျြဂကျြနဲ့နခေဲ့နျောလို့ပွောရှာတယျ ရငျထဲမှာပွောမပွတတျအောငျဝမျးနညျးခံစားရတယျ တဖကျမှာလဲမပွညျ့စုံနိုငျဖူးဆိုတာ သိပမေယျ့သူ့အဖရှေိတုနျးကလိုပွညျ့စုံအောငျကွိုးစားပီးထားရမယျ ငါကနျြးမာမှအသကျရှညျမှဖွဈမယျလို့စဉျးစားမိတယျ မမေသေ့ားကွီးလေး သနျမာကွံ့ခိုငျတဲ့သားလေးဖွဈပါစသေားရယျ” ရေးသားထားရာ ပရိသတျကွီးအတှကျ ပွနျ လညျဖျောပွပေးလိုကျပါ တယျ ။
ပရိတ်သတ်တွေကြား ဝေဖန်မှုတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်မြင့်တတ်နေတဲ့ ထပ်ဆင့်အကယ်ဒမီမင်းသားကြီးရန်အောင်ရဲ့ကျေးဇူးတင်စကားများ